Nanafoana Ny Fandefasana Ilay Sarimihetsika Momba Ilay Mpiaro Ny Tontolo Iainana Nisy Namono · Global Voices teny Malagasy
Nanafoana Ny Fandefasana Ilay Sarimihetsika Momba Ilay Mpiaro Ny Tontolo Iainana Nisy Namono
Voadika ny 03 Mey 2016 9:04 GMT
Sary avy amin'ny pejy Facebook ‘Izaho no Chut Wutty’
Nanakana ny fampielezana an'ilay horonantsary fanadihadiana momba ny fiainana sy ny tolon'i Chut Wutty, ilay mpiaro ny tontolo iainana, izay novonoina tamin'ny 2012 rehefa namaky bantsilana ny fitrandrahana ala tsy ara-dalàna ny governemanta Kambojiana.
Tsy nahazoana alàlana avy amin'ny manam-pahefana ny fampielezana ny horonan-tsary “Izaho no Chut Wutty” hoy ny Minisitry ny Kolontsaina sy ny Zavakanto .
Nanao ny fanambaràna tao amin'ny Facebook ny mpamokatra ilay sarimihetsika :
Nofoanana noho ny baikon'i Atoa Sin Chan Saya ny fijerena ilay sarimihetsika tamin'ity herinandro ity ao amin'ny Meta House, Sampan-draharahan'ny Sarimihetsika sy fampielezana ara-kolotsaina -Fa inona no anton'izany Atoa Sin Chan Saya? Tsy faly ve ianao mba hizara ilay tantaran'ireo mpiaro ny ala ao Kambodza ?
Mpitarika ny tambajotra manohitra ny fandripahana ny alan'ny Prey Lang i Chut Wutty talohan'ny nahafatesany, ala lehibe arovana ao Kambodza sy fiveloman'ny tompo-tany Kuy .
Nitsikera ny fanapahan-kevitry ny governemanta izay tsy nihevitra ny hahasoa ny mponina sy ny toetry ny tontolo iainana tamin'ny fanomezana tany ahofa maro ho an'ny mpampiasa vola vahiny i Chut Wutty sy ireo hafa mpiaro ny tontolo iainana.
Novonoin'ilay miaramila mpiambina ny fanapahana sy fitrandrahana ala tao amin'ny faritanin'i Koh Kong tamin'ny Aprily 2012 i Chut Wutty. Nanambara ny fanadihadihana nataon'ny governemanta fa tsinahy ny fitifirana ; nefa mino ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona fa natao mihitsy izany mba hampanginana ny fanoheran‘ny mpamboly sy ny foko tompon-tany. Nanameloka ny fahafatesany ny Vondrona mpiaro ny tontolo iainana, ny mpiaro ny zon'olombelona, ​​ary ny antoko politika mpanohitra .
Tamin'ny 2014, na ny Filoha Amerikana Barack Obama aza nahafantatra ny asan'ny olona maro sy ny vondron'olona isan-karazany manohy ny tolon'i Chut Wutty.
Mino ny talen'ny sarimihetsika fa ny fanapahan-kevitry ny governemanta Kambojiana ho fampitsaharana ny fampielezana ny horonantsary fanadihadiana dia tsy mifandray fotsiny amin'ny paikan'ny fitantànana ihany, fa fiasa ara-politika natao mba hanamaivanina ihany koa ny ezaka ho fahatsiarovana ny nahafatesan'i Chut Wutty tamin'ity herinandro ity.
Ny dika manontolon'ny sarimihetsika, amin'ny teny Khmer sy teny Anglisy, dia azo jerena ao amin'ny Vimeo amin'ny alalan'ny fanofana na fividianana. Hita eto ambany ny sombin'ny filma:
Nisy fampielezana horonan-tsary manokana ihany koa natao manerana ny firenena mba hiresahana momba ny ady mitohin'ny Kambojiana manohitra ny fanitsakitsahana ny zon'ny fananan-tany.
Nampifandray ny fandraràna amin'ny kolontsain'ny tsimatimanota ao amin'ny firenena i Chak Sopheap, mpikatroka ny zon'olombelona:
Aleon'ny governemanta maneho ny finiavany mba hampangina ny antso amin'ny rariny sy manohana ireo nahavita heloka bevava mahatsiravina toy izay hanohana ny fandraisana an-tànana ny fanadihadiana manan-danja. Manome ohatra hafa amin'ny kolontsaina misongadin'ny tsimatimanota ao Kambodza sy ny halavan'ny tanan'ny governemanta hiarovana azy io izany fandraràna izany .
Nampitandrina ny governemanta i Kalyanee Mam, izay nanatrika ny fijerena an-takonana ny horonantsary ihany koa, fa tsy hanakana ny olona amin'ny fikatsahana ny rariny izany:
Satria tsy misy governemanta afaka handràra ny zo hanome voninahitra sy hanaja ny tanindrazana, tsy misy governemanta afaka hisakana anay tsy hivory sy haneho ny fitiavanay ny tanindrazana amin'ny alalan'ny fijerena ny horonantsary. Nandrehitra jiro ao am-ponay i Chut Wutty, hitohy hirehitra foana izany raha mbola manohy maneho ny fitiavanay ny tanindrazanay izahay.
8 ora izayFilipina
3 andro izaySingapaoro